ဝိုင်သတင်းများ | eTurboNews
ပင်မစာမျက်နှာ » ဝိုင်နှင့်ဝိညာဉ်များ
အမျိုးအစား - ဝိုင် & ဝိညာဉ်များ
ဝိုင်၊ ဘီယာနှင့်စိတ်ဓာတ်အတွက်သတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ - ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ trends ။ ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း, အသစ်သောခေတ်ရေစီးကြောင်း, စပျစ်ရည်ကိုအရသာနှင့်ပိုမို။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ သတင်းနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုပေး။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ wines.travel, ၀ ိုင်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောဘလော့ဂ်အသစ်ကိုကြည့်ရှုရန် eTurboNews.
စပိန်ဝိုင်၊ အရသာရှိသော စပိန်အစားအစာနှင့် ဘုရင်တစ်ပါးသည် ပထမနေ့၏ ပျော်ရွှင်စရာအပိုင်းဖြစ်သည်။ မနက်ဖြန်...
Chenin Blanc သည် လျစ်လျူရှုထားသော စပျစ်သီးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? Chardonnay သို့မဟုတ် Sauvignon ထက်ပို၍ စိန်ခေါ်မှုရှိသောကြောင့်...
ပြင်သစ်သည် ဇိမ်ခံပစ္စည်းအဖြစ် မှတ်သားထားပြီး ဤခင်းကျင်းတွင် ပါဝင်သော ဝိုင်များဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်က ထုတ်လုပ်တဲ့...
Rum သည်သင်၏ ဦး နှောက်အစားအစာ၊ အရက်နှင့် New York လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖြစ်သည်
COVID-19 မှဂျာမနီရှိလွတ်လပ်မှု - ဒူရှဲလ်ဒေါ့ဖ် ...
Napa Valley Wine Train သည်မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည်
မြူးနစ် Oktoberfest COVID-19 ကျော်ထပ်မံဖျက်သိမ်း ...
လူတိုင်းအတွက်ရှမ်ပိန်သည်သင်၏ COVID လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်
အဆိုပြုထားသော COVID-19 အရက်ပိတ်ပင်မှုသည်အရက်ဆိုင်များအကြားဆူညံသံများ ...
တူရကီမှ Pegasus လေကြောင်းလိုင်းသည်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုစတင် ...
Carlos Vogeler သည်ကမ္ဘာ့ဝိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်
ခရီးသွားရတာကိုနှစ်သက်ပါသလား။ 2020/21 WTN နှစ်သစ်ကူးသို့ဖိတ်ကြားချက် ...
FAA ၏ Flyers အခွင့်အရေး - Boeing နှင့်လျှို့ဝှက်စာချုပ်ကိုချိုးဖောက်ပါ
Madame Tussauds ဘာလင်: Trump ကိုစွန့်ပစ်, America ကိုကြီးမြတ်စေ ...
မော်လ်တာ၏ Hidden ကျောက်မျက်
Lufthansa Trachtencrew လေယာဉ်ခရီးစဉ်သည်ယခုနှစ်တွင်တဖန်ပျံသန်းသည်
Wine and Dine ယခုလည်းနီးပါးရရှိနိုင်ပါ
Food & Beverage မှဟိုတယ်ရဲ့အနာဂတ် - COVID post ...
Bavaria ၀ န်ကြီးဌာန၊
သင်ကခမ်းနားထည်ဝါပြီးရှုပ်ထွေးမှုရှိသလား။ Bordeaux သို့သွန်းလောင်းပါ။
အသစ် buzz.travel သည်သင်၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုမည်သို့စောင့်ရှောက်မည်နည်း။
လူဂန်နာ၊ အီတလီ - Wings တွင်စောင့်နေသောဝိုင်များ
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဝိုင်များစွာ
Vinitaly: နောက်ထပ်ကွန်ဖရင့်သည် Coronavirus ကိုကိုက်သည်။
Monterey ကောင်တီဝိုင်များ - ဝိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်မိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ITB တက်နေပါသလား။ Coronavirus ကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ။ ဘာလဲ...
ဝိုင် Partisans များအတွက်ကြီးမားသောသဘောတူညီချက်
စိန့်၏ 2016 Grands Crus အတန်းမှကြိုဆိုပါတယ် ...
Nizza DOCG, အီတလီ
၇၀၀ နယူးဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဘားများဖွင့်လှစ်တော့မည် ...
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Oktoberfest: Lufthansa လေယာဉ်များ ...
၂၀၂၀ အတွက်စားသောက်ဆိုင် ၁၀ ခုကိုကြေညာခဲ့သည်